व्यावसायिक आलु खेती गर्ने ७ उपाय
आलुलाई तरकारीको राजा पनि भन्ने गरिन्छ। संसारका १ सय २५ भन्दा बढी देशमा आलु उत्पादन हुने गरेको छ। अधिकांश देशहरूमा तरकारीका परिकारमा आलुको प्रयोग गरेको पाइन्छ। आलुलाई सर्वमान्य तरकारी वालीका रूपमा मात्र हैन यसका विभिन्न वहुआयमिक परिकारहरू बनाउन सकिन्छ।
नेपालमा पनि आलुको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा रहेको छ। नेपालमा खेती किसानी गर्ने हरेक परिवारले आलु लगाउने सिजनमा आलुको खेती नगरेको कमै हुन्छ। आलु खेतीका लागि आवश्यक तौरतरिका र अपनाउनुपर्ने सजगकताका बरेमा केही अति आवश्यक जानकारी:
आलुका लागि उपयुक्त माटोः आलु खेतीका लागि हल्का चिसो माटो आवश्यक पर्ने गर्छ। आलु लगाउनुभन्दा पहिले खनजोत गरी माटोलाई खुकुलो पार्नु पर्ने हुन्छ। बढी सुख्खा माटो भएमा सिँचाई गर्न सकिन्छ तर सिँचाई गरेको ३ देखि ५ दिनसम्म पर्खिई आलु लगाउँदा माटोमा पानीको मात्रा आलुका लागि आवश्यकता अनुसारको हुन सक्छ।
जग्गा तयारीः आलु लगाउने खेत वा बरीलाई २ देखि ३ पल्टसम्म गोड्नु पर्छ। गोडी सकेपछि त्यसमा खनजोत गरी भएका ठुला ठुला डल्लाहरूलाई फुटाई मसिनो बनाउनु पर्छ।
मलको प्रयोगः आलु रोप्नुभन्दा पहिले मलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। आलु रोप्नुभन्दा पहिले सतहमा मल छर्ने र सामान्य खनजोत गर्ने गर्नुपर्छ। यसपछि आलु लगाउने समयमा ड्याँगमा गोठे मलका साथै नाइट्रोजन र यूरिया प्रयोग गर्न सकिन्छ। आलुमा विशेष गरी नाइट्रोजन, यूरिया र पोटासको मिश्रण गराई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
सिंचाईः आलुलाई फसल तयार हुन्जेलसम्म ३ देखि ५ पटकसम्म सिँचाई गर्न सकिन्छ। सिंचाईको मात्रा मिलाउनमा त्यहाँको माटोमा निर्भर रहने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। माटोको संरचना अनि माटोको तापमान अनुसार सिँचाई गर्न वैज्ञानिकहरूको सुझाव छ। आवश्यकताभन्दा बढी सिँचाई भए आलुको फल कुहिएर नष्ट हुने डर हुने भएकोले आलुको सिचाई गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
आलु खन्नेः आलु १० हप्ता अर्थात् साढे दुई महिनामा तयार हुन्छ। आलुलाई खन्दा सुख्खा दिनमा खन्ने गर्नुपर्छ। खन्ने समयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फलमा चोट लागे आलु नै बिग्रने र कुहिने डर बढी हुन्छ। आलुलाई खनिसकेपछि पानीमा धुनु सबैभन्दा हानिकारक हुन्छ त्यसैले नधोई राख्नुपर्ने हुन्छ।
आलु खेतीमा आउने समस्याहरुः आलु फलाउन जति सजिलो छ त्यसभन्दा धेरै गाह्रो यसलाई बचाई राख्न हुन्छ। आलुको तापक्रम मिलाउन नसके कुहिने डर बढी हुन्छ। यसमा रहेको माटो र चिसोपनालाई खनिसकेपछि विशेष व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने कुहिन्छ। यति मात्र हैन आलुमा विशेष प्रकारको किरा लाग्ने गर्दछ जसले भित्रभित्रै खाएर कालो रेखा बनाउँछ। जसले आलु खान योग्य हुँदैन। आलुको बीउ छनौटमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिन सकेनौ भने पनि यसको उत्पादन राम्रो लिन सकिँदैन। आलुमा लाग्ने विभिन्न रोगहरू हुन्छन् त्यस्ता रोगबाट बचाउनका लागि नजिकैको जेटिए, सेवा केन्द्रका कर्मचारी वा कृषि विकास कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने गर्नु पर्छ।
आलुको सुरक्षाः आलु खनिसकेपछि भण्डार गर्ने स्थानमा लैजानुभन्दा पहिले घाम नपर्ने सुख्खा स्थानमा राख्ने। यसपछि इमी डाक्लोरेपिड १७ दशमलव ८ लाई ५ लिटर पानीमा मिलाई आलुको दानामा छर्कने। यस्तो प्रक्रिया प्रत्येक दुई/दुई महिनामा गर्नुपर्ने वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन्।
यि ६ खानेकुरा जसलाई पुनः तताएर खाँदा क्यान्सरको खतरा
सेयर बजारमा प्रवेश गर्नुअघि जान्नैपर्ने ७ कुरा
कार्यक्रम वा परियोजनाका लागि प्रोपोजल कसरी लेख्ने ?
सत्ता गठबन्धनको बैठक सकियो, के भयो निर्णय ?
तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए सबै घेरा तोड्छौं : विप्लव
बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक, दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्यो
नेपालको अर्थतन्त्रबारे यस्तो छ एडिबीको प्रक्षेपण
मौसम पूर्वानुमान : यी क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना
नेकपा एकीकृत समाजवादको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक आज, यस्ता छन् एजेण्डा
काठमाडौंसहित ७ जिल्लामा आज कांग्रेसको वडा अधिवेशन, मोरङमा थापा पक्ष पुग्यो अदालत
एमालेभित्र संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दीको समस्या स्वतः अन्त्य हुँदैन : ईश्वर पोखरेल